महाराजधिराजबाट आममाफी आयो, नाच्नुु पर्ने भयो : माधव नेपाल:: Mero Desh
Published on: ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १२:५२
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई श्री ५ महा राजधिराजको संज्ञा दिएका छन् । शुक्रबार पुष्पलाल मित्रता केन्द्रद्वारा आयोजित ४३ औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका अवसरमा बोल्दै ओलीले दिएको आममाफीको विषयमाथि खण्डन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
नेता नेपालल भने, ‘हिजो महामहिम श्री ५ महाराजधि राजबाट अभिव्यक्ति आयो, माधव नेपाल लगायतका माननीय सदस्यहरुमाथि जति पनि स्पष्टीकरण सोधिएका छन्, उनीहरुलाई आममाफी दिइन्छ । एम्नेस्टी इज ग्रान्टेड । हामी गदगद् भयौँ ।’
ओलीले दिएको आममाफीमा अब नाच्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसको कटाक्ष गरे । उनले भने, ‘महाराजधिराज खुसी हुनु भएको छ । हामीलाई आममाफी मिलेछ । नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो । यही हो पद्धती ? यसलाई कम्युनिस्ट पद्धती भनिन्छ ?’
साथै, सत्ताबाट बहिर्गमन भए पनि अध्यक्ष ओलीको व्यवहारमा परिवर्तन नभएको पनि नेता नेपालले भने का छन् । उनले भने, ‘मान्छे सुध्रिएलान भन्यो ।
आज सुध्रिन्छन कि भन्या छ भोलि सुध्रिन्छन कि भन्या छ । केही नबोलेर हिजो मीठो–मीठो शब्द पनि मैले बोलेँ पुष्पलाको कार्यक्रममा । ख्याल गरेर बोलेको छु ।
जिब्रोले बोल्दी पो हाल्लाकी भन्ने कत्रो चिन्ता ? बादशाहलाई घोडाबाट तल झारेपछि पनि नहुने रहेछ ।